Nepal Mamila | प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ आजदेखि सुरु हुँदै, यी हुन् बहसमा उत्रनेहरू - Nepal Mamila प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ आजदेखि सुरु हुँदै, यी हुन् बहसमा उत्रनेहरू - Nepal Mamila
प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ आजदेखि सुरु हुँदै, यी हुन् बहसमा उत्रनेहरू
काठमाडौ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा आज (वुधबार)देखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु हुँदैछ। यो सुनुवाइ जेठ ७ गते मध्यरातमा भएको विघटनको मुद्दामध्ये विपक्षी गठनबन्धनका नेता शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदले दायर गरेको रिटमाथि हुँदै छ।
सर्वोच्चले सुनुवाइका क्रममा इजलास कक्षभित्र रिट निवेदकहरुमध्येबाट एक पटकमा अधिकतम पाँच जना सम्म प्रवेश गराउने आदेशमा उल्लेख छ। निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीहरु एक पटकमा बढीमा तीन जना, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट खटिने सरकारी वकिलहरुमध्येबाट एक पटकमा बढीमा तीनजना उपस्थित हुन पाउने आदेशमा उल्लेख छ। अन्य प्रत्यर्थीहरु प्रत्येकको तर्फबाट एक पटकमा दुई÷दुई जना कानुन व्यवसायीलाई मात्र इजलास कक्षभित्र प्रवेश दिनेगरी प्रवेश पासको व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
को को उत्रँदैछन् निवेदकका तर्फवाट बहसमा?
के छ प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी?
सर्वोच्च बारवाट २ र नेपाल बारवाट तीन जना एमिकस क्युरीले आफ्नो धारणा राख्ने छन्। उनीहरुको धारणापछि निवेदकहरुलाई जवाफ दिने समय उपलव्ध हुने छ। उनीहरुको जवाफपछि सर्वोच्चले आफ्नो निर्णय सुनाउनेछ।